विश्व Archives » खबरहरुको एउटै केन्द्र
khabar kendra आईतवार, मंसिर ९, २०७५ १३:५२
९,मङ्सिर, काठमाडौं । भारतको अयोध्यामा आइतबार रामभक्तको धर्म सभा भइरहेको छ । विश्व हिन्दू परिषद विहिपको धर्मसभामा दुई लाख रामभक्त भेला हुने जनाइएको छ ।…
khabar kendra बिहीबार, कार्तिक १५, २०७५ १३:४६
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी) को टी-२० क्रिकेटको नयाँ वरियतामा नेपालका ४ खेलाडी समावेश भएका छन् । आइसिसीले बुधबार राति सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा…
khabar kendra शुक्रबार, कार्तिक ९, २०७५ ००:५६
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले एसपी डिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदिश भट्टलाई बर्खास्त गरेको छ । निर्मला पन्त हत्याको छानविनमा लापरवाही गरेको भन्दै विहीबार मन्त्रालयले बर्खास्त…
khabar kendra शुक्रबार, कार्तिक ९, २०७५ ००:११
काठमाडौँ । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा र पूर्वविदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनलाई हुलाकमार्फत् बम पठाएपछि अमेरिकाका सनसनी मच्चिएको छ । हुलाकमार्फत बमजस्तै शंकास्पद विस्फोटक पदार्थ पठाइएको विषयमा…
khabar kendra शुक्रबार, कार्तिक ९, २०७५ ००:०८
khabar kendra बुधबार, कार्तिक ७, २०७५ २०:४१
काठमाडौं । साउदी अरबले पत्रकार जमाल खसोज्जीको हत्यारा जो भएपनि उसलाई कडा कानुनी सजाय हुने जनाएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा…
Cam Erotismo DilettantescoeA Titolo Di Favore Chat Porno dal Esuberante बुधबार, कार्तिक ७, २०७५ २०:४१
Una guida completa sulla chat di Badoo: le istruzioni su modo funziona il luogo di incontri, aperto ancora appena app. बुधबार, कार्तिक ७, २०७५ २०:४१
Linetea5588Taipei Taoyuan Kaohsiung hsinchu Taichung Tainan companion outcall therapeutic massage बुधबार, कार्तिक ७, २०७५ २०:४१
L’informazione successiva istanza attraverso perfezionare l’iscrizioneaTinderel’indirizzo email giacche si vuole associare all’uso dell’app. Una turno digitato l’indirizzo di posta elettronica tocchiamo il tasto Continua. बुधबार, कार्तिक ७, २०७५ २०:४१
Barry managed to make it towards theabeautiful printable PDF for your requirements, due to the fact he is super like that बुधबार, कार्तिक ७, २०७५ २०:४१